Prisma ma cusbooneysiiso qaabka laba jibbaaran ee miirayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Prisma waa la cusbooneysiiyaa oo lagu bixiyaa qaabka laba jibbaaran si loo siiyo xorriyad badan markii la abuurayo
Prisma shaki la'aan waa barnaamijka ugu fiican ee la bilaabay sannadkan labada Android iyo iOS. Uma maleyneynin in codsi uu na siin karo awood aan ugu adeegsanno shaandhooyinkiisa u beddel sawirradaas wanaagsan wax ku dhow farshaxanka wanaagsan adigoon wax isdaba marin, kaliya dooro miiraha si aad u dalbato.
Maanta barnaamijkan waa la cusbooneysiiyay si looga faa'iideysto mid ka mid ah xaddidaadaha ku xiran barnaamijka laftiisa, sidii ay ahayd qaabkaas laba jibbaaran taas ayaa naga hor istaagtay in aan isticmaalno muuqaalka, wax caadi ka ah sawirrada aan ka soo qaadno taleefannada casriga ah. Sidaa darteed, hadda waxay u muuqan doonaan laba jibbaarane ka badan qaabkaas laba jibbaaran ee hore loogu sameeyay 'Instagram'.
Cusboonaysiinta cusub ayaa sidoo kale la socota a cunto cusub oo ku saleysan goobta iyo xalinta sawirada sidoo kale waxaa lagu kordhiyay labo, taas oo macnaheedu yahay in sawirada ay ka muuqan doonaan sidii hore weligood, sidaa darteed dhamaan farshaxanka aad ku abuuri doonto sawiradaada adoo adeegsanaya Prisma, ayaa aad ufiicnaan doona
Cunnada goobta ku saleysan ee muujineysa waxyaabaha aad rabto inaad doorato inay ku arkaan kuwa kuu dhow, tirada dadka aad siiso Sida oo kale, waxyaabahaani waxay ku faafi doonaan sida xumbada si ay u gaaraan isticmaaleyaal badan. Fikrad asal ah oo ay adeegsadaan barnaamijyada kale sida Sirta iyo kuwa fariimaha goobta ku saleysan, sidaa darteed waxaa la siinayaa qallooca si loo sii nooleeyo khibrada isticmaale ee ugu dambeeya ee Prisma.
Cusboonaysiinta ayaa ah durba u imanaya Android, sidaas darteed waa inaad horeyba u hubineysaa haddii aad u haysatid inaad orod ku sameyso si aad dib ugu soo celiso sawirradaas aad ku beddeli karto iyada oo aan xad lahayn qaabka laba jibbaaran sidii ay u dhacday illaa maanta. Cusboonaysiin weyn oo loogu talagalay mid ka mid ah barnaamijyada shaandhada ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Prisma waa la cusbooneysiiyaa oo lagu bixiyaa qaabka laba jibbaaran si loo siiyo xorriyad badan markii la abuurayo
Haa !!! Waxaan ugu baahday iyaga si xalin fiican
Jawaab Lili Mejia
StockUnlimited waxay ku siineysaa inaad soo dejiso aan xadidneyn oo muuqaallo ah, sawirro iyo wax la mid ah Netflix
Hayao Miyazaki, oo ah aasaasaha Studio Ghibli, ayaa si cad u qeexaya waxa uu ka qabo animation-ka AI